Robbie Williams Oo Ka Heesi Doona Furitaanka & Halyeeyga Reer Brazil Ronaldo Oo Ka Qeyb Noqon Doona Furitaanka Koobka Aduunka. – Laacib.net
Dhacdaa 21-aad ee koobka Aduunka ayaa maanta albaabada loo furi doonaa iyadoo Russia ay nasiib u yeelatay iney isku keento malaayiin qof oo ka kala socda daafaha caalamka si ay qaabab kala duwan ula falgalaan kubadda cagta.
Ka hor inta aysan bilaaban ciyaarta u dhaxeysa wadamada Russia iyo Saudi Arabia oo nasiib u yeeshay in lagu furo koobka Aduunka, waxaa jiri doonta madadaalo aan caadi aheyn oo ay sameyn doonaan koox la diyaariyay oo isku dayi doonaa iney farshaxan kusoo jiitaan indhaha caalamka.
Farshaxankaas iyo Mahrajaanka kala duwan ee garoonka lagu soo bandhigi doono waxaa daba socon madadaalo Music ah taasoo uu wakiil ka yahay fanaanka caanka ah ee reer England Robbie Williams.
Waa Kuma Robbie Williams?
Robert Peter Williams wuxuu sanadkii 1974-tii ku dhashay Staffordshire oo ku taala Ingiriiska, waana 44-jir aad looga jecel yahay dalkiisa kuna dheereeya loo yaqaano (Pop Rock), kuna darso inuu yahay shaqsi aad ugu dheereeya qoob ka ciyaarka (Dance).
Shaqadaan wuxuu ku jiraa muddo 28-sano ah maadaama uu soo galay isagoo aad u dhalinyar sanadkii 1990-kii.
Yaa Ku Wehlin Doona?
Aida Garifullina oo ah 30-jir u dhalatay dalka Russia ayaa sidoo kale kasoo muuqan doonta xafladda, sidoo kalana qof walba oo kubadda cagta xog ka haya wuxuu sidoo kale arki doonaa halyeeygii hore qaranka Brazil Ronaldo De Lima kaas oo ka mid ah shaqsiyaadka yar ee laba jeer hantay koobka Aduunka.
80,000 kun taageerayaal ah ayaa la rajeynayaa iney kasoo qeybgalaan kulanka furitaanka, sidookalana shaki kuma jiro in malaayiin qof ay indhaha ku heyso dhacdaa ugu weyn kubadda cagta bilowgeeda.
‘Waligey ma maleynin inaan qeyb ka noqon doono dabaal daggaan weyn ee koobka Adduunka, kaas oo ka dhacaya wadankeyga” ayey tiri Aida Garifullina.